Sida ay Daabacayaashu u Diyaarin Karaan Xarig Teknolojiyad ah si ay u gaaraan Dhageystayaal aad u kala jaban Martech Zone
2021 ayaa ka dhigi doonta ama u jabin doonta daabacayaasha. Sannadka soo socda wuxuu laba jibaari doonaa cadaadiska saaran milkiilayaasha warbaahinta, kaliya ciyaartoyda ugu caqliga badan ayaa sii joogi doona. Xayeysiinta dhijitaalka ah sida aan ognahay waxay ku dhowdahay dhammaad. Waxaan u dhaqaaqeynaa suuq aad u kala daadsan, daabiciyayaashuna waxay u baahan yihiin inay dib uga fikiraan meelahooda nidaamka deegaan.
Daabacayaashu waxay la kulmi doonaan caqabado adag oo la xiriira waxqabadka, aqoonsiga isticmaalaha, iyo ilaalinta macluumaadka shaqsiyeed. Si ay u noolaadaan, waxay u baahan doonaan inay ku sii socdaan qarka u saaran tikniyoolajiyadda. Intaas waxaa sii dheer, waxaan kala jebin doonaa arrimaha ugu waawayn ee 2021 u soo bandhigi doona daabacayaasha iyo tilmaamaha tiknoolajiyada xallin kara.
2020 waxay noqotay inay noqoto duufaan kufiican wershadaha, maadaama madbacadaha ay u adkaysteen labalaab cadaadis dhaqaale xumo iyo tartiib tartiib ah looga takhalusay aqoonsiyada xayeysiiska. Ku riixida sharci dejinta ilaalinta macluumaadka shakhsi ahaaneed iyo yaraynta miisaaniyadaha xayeysiinta waxay abuureysaa jawi gebi ahaanba cusub oo daabacaadda dhijitaalka ahi u baahan tahay inay la jaan qaado saddexda caqabadood ee ugu waaweyn.
Imtixaanka ugu horreeya ee ugu weyn ee daabacayaasha ayaa ah hoos u dhaca dhaqaale ee ay keento COVID-19. Xayeysiiyayaashu way hakinayaan, dib ayey u dhigayaan ololahooda, waxayna dib u qoondeeynayaan miisaaniyadda kanaallo aad u qiimo badan.
Waqtiyo adag ayaa imanaya warbaahinta xayeysiinta la taageero. Sida laga soo xigtay IAB, dhibaatada corona-ka ayaa horseeday koror ballaaran oo ku saabsan isticmaalka wararka, laakiin kuwa daabaca ma awoodo inay lacag ku kasbadaan laba jeer sida ugu badan in ay qaadacaan iibsadayaasha warbaahinta iyo kuwa kale).
Buzzfeed, oo ah warbaahin fayras ah oo soo martay kobaca dakhliga laba-godka ah labadii sano ee la soo dhaafay, dhawaan dhimista shaqaalaha oo ay weheliyaan tiirarka kale ee daabacaadda wararka dijitaalka ah sida Vox, Vice, Quartz, The Economist, iwm. In kasta oo daabacayaasha caalamku ay la kulmeen xoogaa adkaysi intii lagu jiray xiisadda, haddana in badan oo ka mid ah warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa gobolka ayaa ka baxay ganacsiga.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn ee soo saarayaasha sanadka soo socda ayaa abuuri doona aqoonsiga isticmaalaha. Marka laga takhaluso cookies-ka xisbiga 3aad ee Google, cinwaanka cinwaankiisu yahay marinnada websaydhku wuu sii yaraan doonaa. Tani waxay saameyn ku yeelan doontaa bartilmaameedka dhagaystayaasha, dib-u-qiimeynta, daboolka soo noqnoqda, iyo u gaar ahaanta taabashada badan.
Nidaamka xayaysiinta dhijitaalka ah ee dijitaalka ah ayaa luminaya kaararka Aqoonsiga ee caadiga ah, taas oo si hubaal ah u horseedi doonta dhul aad u kala jaban. Wershaduhu waxay horey u bixiyeen dhowr waxyaalood oo lagu beddeli karo raadraaca go'aaminta, iyadoo lagu saleynayo qiimeynta waxtarka kooxda, sida Sanduuqa Asturnaanta Google, iyo Shirkadda Apple ee SKAd. Si kastaba ha noqotee, xitaa xalka ugu horumarsan ee noocaas ah uma horseedi doono ku noqoshada ganacsiga sidii caadiga ahayd. Asal ahaan, waxaan u dhaqaaqeynaa shabakad aan la aqoon.
Waa muuqaal cusub, halkaas oo xayeysiiyayaashu ay ku dhibtoon doonaan inay ka fogaadaan kharash badan marka la eego xiritaanka khaldan, macaamiisha la gaadhsiinta farriinta khaldan, iyo beegsiga si ballaadhan iwm. Waxay qaadan doontaa wakhti in lagu qorsheeyo habab cusub oo ah helitaanka isticmaalaha waxayna u baahan doonaan qalab cusub iyo moodellada sifo lagu qiimeeyo waxtarka iyada oo aan lagu tiirsanayn Aqoonsiga xayeysiinta isticmaalaha.
Korodhka sharciga asturnaanta, sida tan Yurub Nidaamka Badbaadinta Macluumaadka Guud (GDPR) iyo Sharciga Asturnaanta Macaamiisha Kalifoorniya ee 2018, ayaa ka dhigaysa mid aad u adag in la bartilmaameedsado oo la shakhsiyeeyo xayeysiinta habdhaqanka internetka ee isticmaalayaasha.
Shuruucdaas oo diiradda saaraya xogta isticmaalaha ayaa qeexi doona isbeddelada soo socda ee tiknoolajiyada tiknoolajiyada iyo istiraatiijiyadda xogta. Qaab-dhismeedka nidaamku wuxuu carqaladeeyaa moodooyinka jira ee dabagalka akhlaaqda isticmaalaha laakiin wuxuu u furayaa albaabbada daabacayaasha inay ku soo ururiyaan xogta isticmaaleyaasha ogolaanshahooda.
Miisaanka xogta wuu yaraan karaa, laakiin siyaasaddu waxay kordhin doontaa tayada xogta la heli karo mustaqbalka fog. Daabacayaashu waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan waqtiga haray si ay u dhisaan moodello si wax ku ool ah ula falgala dhagaystayaasha. Qawaaniinta asturnaanta waa inay la jaanqaaddaa tiknoolajiyadda daabacaha iyo qaababka maaraynta xogta. Ma jiro wax hal-ku-habboon-oo dhan xal maxaa yeelay waxaa jira xeerar qarsoodi ah oo kala duwan oo suuqyo kala duwan ah.
Sidee Publisers ugu guuleysan karaan muuqaalka muuqaalka cusub?
Suuqa cusub ee kala daadsan, xogta isticmaalayaasha ayaa ah hantida ugu qiimaha badan ee xayeysiistayaasha. Waxay ku siinaysaa noocyada fahamka macaamiisha, danahooda, iibsashada dookhyada, iyo dabeecadda goob kasta oo taabasho leh calaamadda. Si kastaba ha noqotee, sharciga dhowrista asturnaanta iyo soo-dhowaanshaha soo-saarista ee kaararka aqoonsiga ayaa ka dhigaya hantidan si aad u yar.
Mid ka mid ah fursadaha ugu waaweyn ee soo-saareyaasha maanta waa inay kala soocaan xogtooda xisbigooda 1aad, ku hawlgeliyaan nidaamyada dibedda, ama u siiyaan xayeysiistayaasha si ay u bartilmaameedsadaan tiradooda gaarka ah.
Daabacayaasha Savvy waxay adeegsanayaan algorithms-ka barashada mashiinka si ay u fahmaan isticmaalka waxyaabaha si ka sii wanaagsan una soo uruuriyaan astaamaha hab-dhaqanka koowaad ee kooxda, taas oo runtii waxqabad u horseedi doonta nooc gaar ah. Tusaale ahaan, bogga dib u eegista baabuurta waxaa laga yaabaa inuu soo ururiyo qaybaha 30-40 xirfadlayaal dakhli dhexdhexaad ah; suuqa aasaasiga ah ee sedan bilaabay. Joornaalka moodada ayaa ururin kara dhagaystayaasha dumarka dakhligoodu sarreeyo ee loogu talagalay noocyada dharka qaaliga ah ee la beegsanayo.
Websaydhada casriga ah, barnaamijyada, iyo barnaamijyadu badanaa waxay leeyihiin dhagaystayaal caalami ah, kuwaas oo dhif ah in si buuxda loogala macaamili karo heshiisyo toos ah. Barnaamijku wuxuu ku gaarsiin karaa dalab caalami ah iyada oo loo marayo oRTB iyo habab kale oo wax lagu iibsado barnaamijyo leh sicir ku saleysan suuq si loo muujiyo.
Dhawaan Buzzfeed, oo horey u riixaysay isdhexgalka asalka ah, dib ugu noqday barnaamijkii kanaalada lagu iibiyo meeleynta xayeysiinta. Daabacayaashu waxay u baahan yihiin xal u oggolaanaya iyaga inay si macquul ah ugu maareeyaan wada-hawlgalayaasha dalabaadka, falanqeynayaan meelaynta xayeysiiska ugu fiican uguna liita, iyo inay qiimeeyaan qiimaha dalabyada.
Isku darka iyo iswaafajinta la-hawlgalayaasha kala duwan, daabacayaashu waxay ku heli karaan qiimaha ugu fiican meelahooda ugu sarreeya iyo sidoo kale taraafikada hadhay. Tartanka madaxu waa tiknoolajiyada ugu fiican ee taas, iyo qaab dhismeedka ugu yar, daabacayaashu waxay isla markaa aqbali karaan dalabyo badan oo ka imanaya noocyo kala duwan oo dalab ah. Xaraashka madaxa waa tiknoolajiyada ugu fiican ee taas, iyo qaabaynta ugu yar, daabacayaashu waxay isku mar aqbali karaan dalabyo badan oo ka imanaya noocyo kala duwan oo dalab ah.
Warbaahinta ay taageerto xayeysiintu waxay u baahan tahay inay ku tijaabiso qaabab caan ah oo xayeysiis ah si loogu magdhabo khasaarihii dakhli ee ololaha xayeysiinta ee la joojiyay.
Sanadka 2021, mudnaanta xayeysiinta ayaa si aad iyo aad u badan u soo jiidan doonta xagga xayeysiinta fiidiyowga.
Macaamiisha casriga ahi waxay ku qaataan illaa saacadood 7 daawashada fiidiyowyada dhijitaalka ah toddobaad kasta. Fiidiyowgu waa nooca ugu mashquulsan. Daawadeyaashu way qabtaan 95% fariin marka aad ku daawaneysid fiidiyow marka la barbardhigo 10% markaad aqrinaysid.
Sida laga soo xigtay warbixinta IAB, ku dhowaad saddex-meelood laba meel miisaaniyadaha dhijitaalka ah ayaa loo qoondeeyay xayeysiinta fiidiyowga, labadaba mobilada iyo desktop-ka. Fiidiyowyaashu waxay soo saaraan aragti waara oo keenta beddelaad iyo iibin. Si aad uga faa'iideysato ciyaarta barnaamijka, daabacayaashu waxay u baahan yihiin awoodo ay ku soo bandhigaan xayeysiiska fiidiyowga, kaas oo la jaan qaadi kara barnaamijyada waaweyn ee dalabyada.
Xirmooyinka Teknolojiyada ee Kala-baxa
Waqtiyadan qalalaasaha leh, daabacayaashu waa inay sida ugu wanaagsan uga faa'iideystaan ​​dhammaan dariiqyada dakhliga ee suurtogalka ah. Dhowr xalal tiknoolaji ah ayaa u oggolaan doona daabacayaasha inay furaan awoodda aan la isticmaalin oo ay kordhiyaan CPM-yada.
Teknolojiyadaha loogu talagalay ka faa'iideysiga xogta kooxda koowaad, iyadoo la adeegsanayo habab barnaamijyo casri ah, iyo baahinta qaabab xayeysiis ah oo loo baahan yahay ayaa qeyb ka ah waxyaabaha loo baahan yahay ee loogu talagalay xirmada tiknoolajiyadda 2021 ee daabacayaasha dhijitaalka ah.
Marar badan, daabacayaashu waxay ka soo ururiyaan tiknoolajiyadooda tiknoolajiyada alaabooyin kala duwan oo aan si fiican u dhexgelin dhexdooda. Isbeddelkii ugu dambeeyay ee daabacaadda dhijitaalka ah wuxuu adeegsanayaa hal madal oo buuxisa dhammaan baahiyaha, halkaasoo dhammaan shaqooyinka ay si habsami leh ugu socdaan nidaam labis ah. Aynu dib u eegno qaybaha ay tahay inay leeyihiin lahaanshaha tiknoolajiyada isku dhafan ee warbaahinta.
Ugu horreyntii, kan ugu horreeya, tiknoolajiyada daabacaha ayaa u baahan inay lahaato server xayeysiis ah. Adeeg xayeysiis sax ah ayaa shuruud u ah lacag-ururinta fikradda wax ku oolka ah. Waxay ubaahantahay inay lahaato shaqeynta maaraynta ololeyaasha xayeysiinta iyo alaabada. Server-ka xayaysiisku wuxuu u oggolaanayaa inuu dejiyo unugyo xayeysiis ah iyo kooxo dib-u-habeyn ku sameeya isla markaana siiya tirakoobka waqtiga-dhabta ah waxqabadka xayeysiiska. Si loo hubiyo in si macquul ah loo buuxiyo, server-yada xayeysiintu waxay u baahan yihiin inay taageeraan dhammaan noocyada xayeysiiska ee jira, sida muuqaalka, fiidiyowga, xayeysiisyada moobiilka, iyo warbaahinta hodanka ah.
Qalabka Maareynta Macluumaadka (DMP)
Marka laga eego dhinaca waxtarka - waxa ugu muhiimsan ee warbaahinta 2021 waa maaraynta xogta isticmaalaha. Uruurinta, falanqaynta, kala soocida, iyo kicinta dhagaystayaasha waa inay lahaadaan waxqabad maanta.
Markay daabacayaashu isticmaalayaan DMP, waxay ku siin karaan lakabyo xog dheeri ah xayeysiistayaasha, iyagoo sare u qaadaya tayada iyo CPM ee dareenka la geeyay. Xogtu waa dahabka cusub, daabacayaashuna waxay ku bixin karaan inay bartilmaameedsadaan tiradooda gaarka ah, qiimeeyaan aragtida sare, ama ku hawlgeliyaan nidaamyada dibedda oo ay lacag ka helaan is-weydaarsiga xogta.
Tirtirida Aqoonsiga xayeysiinta ayaa cirka isku shareeri doonta baahida loo qabo xogta xisbiga 1aad, DMP-na waa shuruud muhiim u ah aruurinta iyo maaraynta macluumaadka isticmaalaha, sameysashada barkado xog ah, ama lagu gaarsiinayo macluumaadka xayeysiistayaasha garaafyada isticmaalaha.
Xalka Xaraashka Madaxa
Tartanka madaxu waa tiknoolajiyad ka saareysa asymmetry-ka macluumaadka u dhexeeya xayeysiistayaasha iyo daabacayaasha marka loo eego qiimaha taraafikada. Tartanka madaxu wuxuu u oggolaanayaa dhammaan dhinacyada inay helaan qiimo ku saleysan dalab ku saleysan meelaha xayeysiiska ah. Waa xaraash meesha DSPs ay u siman yihiin helitaanka iibka, marka loo eego biyo dhaca iyo oRTB, halkaasoo ay ku galaan xaraashka markooda.
Hirgelinta qandaraas madaxeed waxay u baahan tahay ilo horumarineed, xayeysiis khibrad leh oo dejin doona walxaha safka ah ee Maareeyaha Xayeysiiska Google iyo heshiis la saxiixashada qandaraasleyaasha. Isu diyaari: dejinta ficilada dalabyada madaxa waxay u baahan tahay koox heegan ah, waqti, iyo dadaal, taas oo mararka qaar wax badan u ah xitaa daabacayaasha waaweyn.
Ciyaartoyda fiidiyowga iyo maqalka
Si loo bilaabo u adeegista xayeysiinta fiidiyowga, qaabka xayeysiiska ee leh eCPM-yada ugu sarreeya, daabacayaashu waxay u baahan yihiin inay qabtaan xoogaa shaqo guri ah. Xayeysiinta fiidiyowga ayaa ka dhib badan muujinta oo waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso dhowr dhinac oo farsamo. Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad heshid fiidiyow fiidiyoow ah oo ku habboon duubka madaxa ee aad dooratay. Noocyada xayeysiiska ee maqalka ah ayaa sidoo kale soo kordhaya, oo gelinta ciyaartoy maqal ah oo ku jirta boggaaga waxay keeni kartaa dalab dheeraad ah oo ka yimaada xayeysiistayaasha.
Barnaamijka Maareynta Hal abuurka (CMP)
CMP waa shuruud u ah maaraynta hal-abuurka barnaamijyada ee barnaamijyada kala duwan iyo qaababka xayeysiiska. CMP waxay toosineysaa dhammaan maaraynta hal-abuurka. Waa inay lahaato istuudiyaha hal-abuurka leh, qalab loogu talagalay tafatirka, hagaajinta iyo abuurida boorar hodan ah oo laga soo bilaabo xoqida oo leh astaamo. Mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah CMP waa shaqeynta si loo waafajiyo hal-abuurka gaarka ah ee loogu talagalay xayeysiinta loogu adeegayo meheradaha kala duwan iyo taageerada habeynta firfircoonaanta firfircoon (DCO). Iyo, dabcan, CMP wanaagsan waa inuu siiyaa maktabad qaabab xayeysiis ah oo la jaan qaada DSPs waaweyn iyo falanqeyn ku saabsan waxqabadka hal abuurka waqtiga dhabta ah.
Guud ahaan, daabiciyeyaashu waxay u baahan yihiin inay kireystaan ​​CMP oo ka caawisa si deg deg ah sameynta iyo baahinta qaabab hal abuur leh baahi aan lahayn hagaajin aan dhammaad lahayn, iyadoo waliba la qaabeynayo oo diiradda la saarayo cabirka.
Si Sum It Up
Waxaa jira waxyaabo badan oo dhismo ah oo loogu talagalay guusha warbaahinta digital. Waxay ka mid yihiin awooda wax ku oolka ah ee xayeysiinta wax ku oolka ah ee noocyada xayeysiiska caanka ah, iyo sidoo kale xalalka barnaamijyada ee lagu dhexgalayo la-hawlgalayaasha dalabaadka waaweyn. Qaybahani waa inay si aan kala go 'lahayn u wada shaqeeyaan, uguna habboon inay noqdaan qayb ka mid ah tiknoolajiyada isku dhafan.
Markaad doorato xirmo tiknoolajiyad mideysan halkii aad ka soo uruurin lahayd qaybaha bixiyeyaasha kala duwan, waxaad ku kalsoonaan kartaa in hal-abuureyaasha la keeni doono iyada oo aan la daahin, waayo-aragnimo isticmaale oo liidata, iyo kala-duwanaanta server sare.
Xirmooyinka tiknoolajiyada saxda ah waxay u baahan tahay inay lahaato shaqeyn si loogu adeego xayeysiinta fiidiyowga iyo maqalka, maareynta xogta, qandaraaska cinwaanka, iyo maareynta maaraynta hal abuurka. Kuwaasi waa waajibka-ay leeyihiin marka aad dooranaysid bixiye, mana aha inaad ku degto wax kayar.
Tags: advertisingbuzzfeedcmpcpmmadal maaraynta hal-abuurkamaamulka xogtamadal maaraynta xogtawarbaahinta digitaldmpxal xaraashka madaxaqoonsigasuuq geynta tiknoolajiyadaxidhmooyingaarka ahbarnaamijkasuuqgeynta barnaamijkapublisherxayeysiis video ahxayeysiinta fiidiyowgasuuqgeynta fiidiyowgafiidiyow muuqaal ah